Yemen: Fihetsiketsehana Mahery Vaika Tamin’ny “Zoma Ala-nenina Farany” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Avrily 2011 19:12 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Français, Ελληνικά, Español, 한국어, Português, English
Mpanao fihetsiketsehana an-tapitrisany no nameno ny kianjan'ny Sanaa sy i Taiz, mba hitaky ny fialan'ny fitondrana Ali Abdulla Saleh. Izay nantsoina hoe Zoma ala-nenina farany , vonona ny hanongana an'i Saleh izy ireo, izay nitondra an'i Yemen nandritra ny 32 taona.
Nanamarika ny fanohanana feno ny fihetsiketsehana lehibe androany ny herinandro manontolo, izay tsy nandiso ny fanantenan'ireo mpijery akaiky. Fiheverana sasany no nilaza fa an-hetsiny ireo nidina an-dalambe mba hanohitra ny fitondrana.
Tao Yemen, @al3ini nizara ity sary ity izay mampiseho vahoaka an'arivony tao amin'ny renivohitra Sanaa:
An-tapitrasany tao amin-ny Lalana faha-60 ao an-drenivohitra Sanaa
Ni- tweet izy hoe:
Jereo ity! Ity no Zoma Ala-nenina farany ao #Sanaa #YEMEN #YF http://t.co/d7KxNZA
Ao Dubai, Iyad El-Baghdadi nanampy hoe:
Tsara izany – fihetsiketsehana tao Taiz #Yemen izay efa mahatratra “eo ho eo amin'ny an-tapitrasany eo” ankehitriny ny isany!
Ary i Muna, avy any@ArabsUnite, nizara ity sarina vehivavy mpanao fihetsiketsehana tao Yemen ity ary nanoratra izy hoe:
Vehivavin'i Sanaa — Tanora sy antitra. #Yemen mikasa #Saleh mba ho AFAKA http://twitpic.com/4o13ak
Mpanao gazety Iona Craig, izay nitatitra tao Yemen, ni-tweet hoe:
Niala ny kianjan'ny fanovana ireo mpanao fihetsiketsehana ho amin'ny vavaka “Zoma Ala-nenina Farany” ary nandeha tamin'ny lalana 60m, miparitaka mihoatra noho ny maily iray: http://bit.ly/e7DfFE #yemen
Ary ao amin'ny bilaoginy, nandefa sary notsongaina nandritra ny andro izy ary nilaza hoe:
Voalohany ny mpanao fihetsiketsehana manohitra ny governemanta no nandao ny sit-in ho amin'ny vavaka “Zoma Ala-nenina Farany” ary nandray ny làlan-dehibe misy làlana izay 60 metatra ny sakany, izay miely mihoatra ny maily iray.
Teny an-dalana dia nikabary tamin'ny mpanohana azy an'arivony ny Filoha Saleh nandritra ny fihetsiketsehana izay efa mahazatra ao an-drenivohitra ankehitriny.
Avy eo tonga ny vaovao momba ireo niharam-boina, izay efa mahazatra isaky ny misy fihetsiketsehana. Yemen Revolution ni-tweet:
Hujja: Lavo ny martiora voalohany. Ny anarany dia i Abdulhameed Huzait ary 15 taona izy. Hamindra fo azy anie i Allah.
Tao Sanaa, alymene1 nizarany horonantsariny, tamin'ny vavaka androany Zoma:
Ary ao amin'ny Twitter, Hamoud Saleh tao amin'io horonantsary io ihany nitsikera hoe (Ar):
Manodidina ny roa tapitrisa ny vahoaka ao amin'ny Làlana faha-60, miantsoantso amin'ny feo iray: Te hanongana ny fitondrana ny vahoaka
Tao Al Baida, ao Yemen, Albaidanews nizara ity Lahatsary an-kira tamin'ny vavaka Zoma ity, nampiseho ireo vahoaka tsy voatanisa androany:
Nandritra izany, nizara lahatsary avy tao amin'ny Al Jazeera i Egyps, tao amin'ny Làlana faha-70 tao Sanaa, izay mampiseho an'i Saleh manao fanambarana tamin'ireo mpanohana tao, nandray ny tetikasa avy amin'ny Gulf Cooperation Council (GCC) na vaomieran'ny fiaraha-miasa ao amin'ny helodrano momba ny fitondrana tetezamita mandritra ny telo volana izy. Nanampy an'i Saleh , ny fianakaviany sy ny mpanolo-tsainany, momba ny tombotsoa amin'ny fanenjehanany tetikasa.
Ahitana ny Bahrain, Arabie Saoudite, Koweit, Qatar, Oman sy Arabe-Unis Emirates ny vaomieran'ny fiaraha-miasa ao amin'ny helodrano.